Dugsiyada hibada iyo kartida leh ee MN | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Miyaad u malaynaysaa in Navigator uu noqon karo mid ku habboon ilmahaaga?
Barnaamijka Navigator wuxuu u adeegaa koox yar oo aad u gaar ah oo ardayda hibada leh (IQs of 140 iyo wixii ka sareeya) fasalka labaad ilaa shanaad. Fasallada Navigator-ku waxay ku yaalliin Dugsiyada Hoose ee Excelsior iyo Scenic Heights , laakiin waxay u adeegaan ardayda ka socota degmada oo dhan iyo wixii ka sii dambeeya iyada oo loo marayo isqorista furan.
Codsiyada Barnaamijka Navigator-ka ee sanad dugsiyeedka 2021-22 waxay ku egtahay Jimcaha, Janaayo 15, 2021 .
Kulamada Macluumaadka Waalidka
Isdiiwaangeli Kalfadhiga Macluumaadka
Nagala soo qaybgal bandhig wacyigalin macno leh oo ay wadaagaan Agaasimaha Navigator iyo macalimiinta. Baro hadafka gaarka ah iyo qaabeynta waxbarista ee barnaamijka, kana dhageyso waalidiinta saameynta Navigator ay ku yeelatay caruurtooda hibada sare leh. Talaabooyinka arjiga iyo shuruudaha meelaynta dib ayaa loo eegi doonaa, waalidkuna waxay fursad u heli doonaan inay su'aalo weydiiyaan.
Talaado, Nofeembar 10 laga bilaabo 6: 30-8 pm, kulan iskaashi ah
Isniinta, Nofeembar 16, laga bilaabo 6: 30-8 pm, kulan iskaashi ah
Fadlan buuxi foomkan diiwaangalinta kooban kahor duhurkii maalinta aad rabto inaad timaado. Waxyar kahor kal-fadhiga, waxaad kuheli doontaa xiriiriyaha kulanka Google iyada oo loo marayo koontada emaylka ee aad isdiiwaangelin jirtay. Waxaan rajeyneynaa inaad nagu soo biiri doontid!
Soo Degso Buug-yaraha Barashada / Navigator-ka Sare
Waa maxay Barnaamijka Navigator?
Sideen u codsadaa?
Waa maxay manhajku?
Ma jiraa farqi u dhexeeya habka waxbaridda ardayda hibada gaarka ah leh?
Ka waran haddii ardaygaygu ku jiro Barashada Luqadda?
Sidee ayuu Barnaamijka Navigator-ku saameyn ugu leeyahay barnaamijkii waxbarasho ee horumarsanaa ee jiray?
Maxaan ugu baahanahay barnaamijkan markaan horeyba u haysanay adeegyo Barasho Sare?
Maxay dhahaan waalidkeen?
Bartayaasha leh IQs-ka 140 iyo wixii ka sareeya
Ardayda hibada gaarka ah u leh fasalka labaad ilaa shanaad, Barnaamijka Navigator wuxuu u adeegaa koox yar oo aad u gaar ah oo bartayaal ah oo leh IQs-ka 140 iyo wixii ka sareeya. Ardayda hibada gaarka ah waxay wadaagaan astaamo badan oo soo socda:
Si madax-bannaan ayuu u shaqeeyaa da'da hore wuxuuna xooga saaraa muddo dheer
Loo kaxeeyo inuu wax u barto dantiisa darteed; xiisaha aan la dabooli karin
Faa'iidaysaa isku xidhka u dhexeeya waxyaabo u muuqda waxyaabo aan xidhiidh lahayn
Wuxuu bartaa fikradaha cusub oo leh tababar yar
Dareen xasaasi ah, ayaa muujinaya dareen horumarsan oo naxariis iyo deg-deg ah oo isbeddel la keenayo
Awood u leh inuu ku fikiro qaab aan la taaban karin da'da hore
Si aan caadi ahayn u milicsiga, wuxuu raadiyaa macno qoto dheer
Erayo waaweyn, awood u leh inuu si qoto dheer wax u akhriyo
Waxay noqon kartaa mid shaki leh, mid xasaasi ah oo qiimeyn leh
Waxay haysaa bakhaar weyn oo macluumaad ah oo ku saabsan mowduucyo badan
Waxay muujisaa xoog joogto ah xagga caqliga, shucuurta iyo male-awaalka
Jawi waxbarasho oo gaar ah
Sideetan sano oo cilmi baaris ah ayaa muujineysa in baahida tacliimeed, bulsho iyo shucuureed ee ardayda hibada gaarka ah aan lagu buuxin karin fasalka caadiga ah ama xitaa barnaamijyada Degmooyinka ee Waxbarashada Sare. Barnaamijka Navigator wuxuu bixiyaa jawi waxbarasho oo khaas ah kaas oo ka faa'iideysanaya awooda aqooneed ee u gaarka ah bartayaasha. Iyadoo la siinayo maadooyin tacliimeed oo horumarsan iyada oo loo marayo waxbarista waxbarista ee kaladuwan, Barnaamijka Navigator wuxuu kobciyaa adkeysiga ardayda iyo adkeysiga garashada markay la kulmaan shaqo adag. Dhiirrigelinta horumarka bulshada-shucuurta, ardayda waxay la falgalaan asxaabta caqliga waxayna la shaqeeyaan macallimiinta fahamsan carruurta hibada sare leh.
Tilaabada 1: Ka qaybgal mid ka mid ah fadhiyada macluumaadka waalidkeen
Ka soo qaybgal fadhiga macluumaadka Navigator ee macluumaadka (eeg kor) si aad wax uga barato barnaamijka Agaasimaha Daraasada Sare, Macallimiinta Navigator, iyo waalidiinta ardayda Navigator-ka hadda. Mawduucyada waxaa ka mid ah: astaamaha guud ee ardayda hibada sare leh, codsiga, imtixaanka IQ, habraacyada meelaynta, qaabaynta barnaamijka, manhajka, iyo khibradaha barashada dhabta ah ee kuwa hibada sare leh.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad dib u eegis ku sameyso buug-yaraha Navigator-ka iyo markhaatifurinta waalidiinta ee boggan si aad wax badan uga ogaatid.
Tilaabada 2: Codsiyada waxaa la qabtay Janaayo 15, 2021
MUHIIM: Haddii cunugaada uusan hada uqorneyn arday Minnetonka ah, laxiriir xafiiska isdiiwaangalinta ardayda 952-401-5012 si aad ubilaawdo nidaamka isqorista furan. Ilmahaaga ayaa loo qiimeyn doonaa Navigator ka dib marka la helo waraaqaha diiwaangelinta furan ee hordhaca ah. Waad buuxin kartaa qalabka arjiga Navigator iyo qalabka isqorista furan si isdaba joog ah.
Waxaan bilaabi doonnaa aqbalida codsiyada Barnaamijka Navigator ee sanad dugsiyeedka 2021-22 Oktoobar 1, 2020.
Tallaabada 3: Xogta guusha
Bixi xogta waxqabadka ardayda ee qiimeynta la qiimeeyay (tusaalooyinka: NWEA, MCA, Imtixaanka Iowa ee Xirfadaha Aasaasiga ah, Woodcock-Johnson). Xogtu waa inay kujirtaa dhibcaha sanad dugsiyeedkii hore, waxaanan kugu dhiirinaynaa inaad ku darto dhibcaha sanadihii hore sidoo kale. Xogta Kasbashada waa qeyb kamid ah guud ahaan astaanta ardayga.
U dir emayl, emayl, ama fakiska xogta guusha:
Tallaabada 4: Qiyaasta Sirdoonka Qiimeynta-Wechsler ee Carruurta
Marka la helo macluumaadka arjiga iyo hanashada (iyo nidaamka diiwaangelinta furan ee bilaabmay haddii ay khuseyso), waqti iyo taariikh uu codsaduhu ku dhammaystirayo Qiyaasta Sirdoonka Carruurta (Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)) ayaa jadwal loo samayn doonaa. WISC waa cabbiraad heer caalami ah oo la aqbalsan yahay oo ku shaqeeya waxqabadka caqliga taasoo keenta IQ miisaan buuxa, faham afka ah, sabab macquul ah, xasuusta shaqada iyo dhibcaha xawaaraha wax qabad. WISC waxaa maamuli doona dhaqtarka cilmu nafsiga ee iskuulka oo ay bixiso Degmadeena. Ardayda leh Miisaanka buuxa ee IQ ama Tilmaamaha Awoodda Guud ee 140 ama ka sarreeya ayaa lagu martiqaadi doonaa inay kaqeybqaataan tallaabada xigta ee nidaamka arjiga: Jilidda.
Iyada oo la raacayo shuruudaha kale, ardayda waa la qiimeeyaa oo loo xushaa barnaamijka Navigator iyadoo lagu saleynayo dabeecaddooda dabiiciga ah iyo xooggooda sida lagu cabiray Wechsler Scale Intelligence Scale for Children (WISC-5). Isticmaalka qalabka diyaarinta imtixaanka WISC (tusaale ahaan, websaydhyada sida "Testingmom.com" iyo barayaasha imtixaanka IQ), waa ka mamnuuc tartamayaasha Navigator , adeegsiga adeegyadana waxay khatar gelin doontaa fursadda cunuggaaga ee kaqeybgalka Barnaamijka Navigator. Cilmi-nafsi yaqaanka ayaa awood u leh inuu arko qaababka jawaabaha ardayda oo si kalsooni leh u muujiya waxqabadka.
Halkii aad ku tababaran lahayd, waxaa muhiimad weyn leh in loo daayo awoodaha dabiiciga ah ee ilmahaaga! Ardayda loogu talagalay barnaamijka ayaa u qalmi doona kaligood - mana jiri doonaan su'aal ku habboon inay ku habboon yihiin. Intaa waxaa sii dheer, fadlan xusuusnow in Minnetonka uu leeyahay qaab dhinacyo badan leh oo ku wajahan aqoonta hibada iyo hibada leh, iyo adeegyadeenna kala duwan waxay xaqiijinayaan in baahi kasta oo ilmo kasta u qabo loolanka waxbarasho la dabooli doono, xitaa haddii aysan u qalmin barnaamijka Navigator.
Fadlan Ogsoonow : Haddii ilmahaaga la siiyay qiimeyn WISC ah sanad gudihii ugu dambeeyay, fadlan emayl ugu dir warbixinta Ashley Carlson ( ashley.carlson@minnetonkaschools.org) . Xaaladaha qaarkood, waxaan awoodnaa inaan u isticmaalno natiijooyinkaas inaan uqalmo cunug tallaabada xigta ee nidaamka dalabka. Haddii ilmahaaga lagu tijaabiyay iyadoo la isticmaalayo qalab kale, waxaan la ballamaynaa qiimeyn WISC ah oo aan la sameyno khabiirkeenna Degmada. Adeegsiga keliya dhibcaha IQ ee laga soo qaatay WISC waxay hubisaa isku mid ahaanta iyo sinnaanta nidaamka meeleynta ee dhammaan carruurta.
Tallaabada 5: Jilidda
Ardayda ku jirta bartilmaameedka IQ waxaa lagu casuumay inay kaqeybqaataan khibrad jilid ah. Inta lagu jiro jilitaanka, macallimiinta Navigator waxay ardayda ka qayb geliyaan xisaabta, akhriska, qorista, iyo waxqabadyada fikirka xasaasiga ah ee u dhigma kuwa ay la kulmi doonaan maalinta caadiga ah ee barnaamijka. Tani waxay siinaysaa ardayda mustaqbalka “dhadhaminta” waayo-aragnimada Navigator-ka, waxayna u oggolaaneysaa shaqaalaheenna inay eegaan sida ay ardaydu u shaqeeyaan una dhexgalaan jawigan waxbarasho ee u gaarka ah.
Tallaabada 6: Go'aanka meelaynta
Guddiga aqbalaadda ayaa dib u eegis ku sameyn doona codsade kasta si shaqsi ah si loo hubiyo in dhammaan ardayda la aqbalay ay u badan tahay inay ku guuleystaan waayo-aragnimo waxbarasho oo guuleysta oo ku jirta Barnaamijka Navigator. Marka go'aanka la gaaro, agaasimaha waxbarashada sare wuxuu ogeysiin doonaa waalidiinta natiijooyinka.
Meesha ay ku habboon tahay, manhajkeenna jira ee Minnetonka wuxuu siiyaa aasaaska waxbarashada. Sababtoo ah ardaydu waxay ku maraan iyada oo ku socota xawaare aad u dhakhso badan, maadooyinka manhajka la kobciyey ayaa muhiim u ah kordhinta iyo qoto dheer. Qalabka la isticmaalay waxaa si gaar ah loogu talagalay ardayda hibada leh, ama waa aalado sida caadiga ah loo isticmaalo heerarka fasal sare, taas oo noo oggolaaneysa inaan dardar galino waxyaabaha ku jira barteenna sare. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah: Mentoring Maths Minds, ALEKS xisaabta, FOSS Science, Jr. Books Great, Paideia Seminars, iyo ilo kale oo badan. Barashada ku saleysan mashruuca, barashada weyddiinta, daraasad iskeed u hagta, ilaha tikniyoolajiyadda iyo mashaariicda barashada adeegga ayaa sidoo kale ah qeybaha ugu muhiimsan ee waxbarista barnaamijka.
Fasallada Navigator-ka si aad ah ayaa loo kala soocaa si loogu waafajiyo heerka waxyaabaha ka kooban awoodaha iyo baahida bartaha. Hababka waxbarista waxay si firfircoon uga qaybqaataan ardayda fikirka-sare ee heer ku habboon diirad-saare sare, bartayaasha is-haga. Intaa waxaa dheer, habka waxbaridda ayaa lagu daraa:
Mowduuc, edbinta maadooyinka
Wax-weydiinta ku saleysan, xalinta dhibaatada dhabta ah ee dunida
Barasho khibrad leh
Xoog saarida horumarka bulshada / shucuurta
Qoto dheer iyo ballaadhka maadooyinka
Qoysaska ku nool xuduudaha Dugsiyada Hoose ee Excelsior ama Scenic Heights waxay leeyihiin gaadiid bas caadi ah. Qoysaska ku nool xuduudaha dugsiyada kale ee Minnetonka waxay marin u heli karaan adeegga baska ee dugsiyada Navigator iyagoo maraya marinnada basaska ee hadda jira (la xiriir Xafiiska Gaadiidka adigoo wacaya 952-401-5000 wixii faahfaahin dheeraad ah) Qoysaska ku nool bannaanka soohdimaha Degmada Minnetonka waxay bixiyaan gaadiid u gaar ah oo ku socda kana taga dugsiga, ama waxay doortaan inay carruurtooda u raacaan waddooyinka basaska jira ee loogu talagalay dugsiyadan.
Barashada luqadaha Shiinaha iyo Isbaanishka ayaa la siin doonaa si ay u taageeraan barashada luqadda labaad ee ardayda ka soo galaysa barnaamijka Barashada Luqadda. Navigator waa barnaamij Ingiriisi ah; hase yeeshe, Degmadeena waxaa ka go'an inay taageerto hanashada hanashada luqadda bartilmaameedka ardayda galaya Navigator-ka fasallada Immersion. Barnaamijka Barashada Luqadda Navigator-ka wuxuu bixiyaa afar saacadood asbuucii oo waxbarid toos ah oo ka baxsan maalinta dugsiga. Barnaamijkan hodanka ah ee waxbarida waxaa loo sameeyay in lagu sii wado hadafka ku hadalka luuqada iyadoo ay suuragal tahay in dib loogu soo celiyo khibradii luuqada ee heerka dhexe.
Sannadkii 2007, Degmadeennu waxay sare u qaadday barnaamijka Barashada Horukacsan waxayna kordhisay shaqaalaha ka socda Dugsiga Hoose ee Dugsiyada Hoose. Ballanqaadka Degmadayada ee barnaamijkaas ayaa sii socota. Barnaamijka Navigator wuxuu bixiyaa qalab waxbarasho oo dheeri ah, aqoon, casharo iyo khibrad si loo sii xoojiyo barnaamijka jira ee Barashada Sare. Intaa waxaa dheer, u guuritaanka ardayda hibada gaarka ah u leh barnaamijka Navigator-ka oo ay la socdaan macallimiin u heellan Navigator waxay u fasaxeysaa ardayda shaqaalaha ah ee Barashada Hormarinta waqtiga ardayda kale ee Barashada Sare.
Barnaamijka Navigator wuxuu qaabilayaa koox yar, oo aad u gaar ah bartayaasha. Baahida ardaydan, oo ay ku jiraan baahiyaha tacliimeed, bulsho iyo shucuureed, laguma dabooli karo fasalka caadiga ah ama xitaa barnaamijyada Waxbarashada Sare. Iyada oo ku saleysan cilmi baaris ballaaran, abuuritaanka jawi ku habboon in wax lagu baro ardaydan hibada gaarka ah waxay u horseedi doontaa:
Guul wax ku ool ah oo muhiim ah
Horumarinta joogtaynta caqliga
Tirtirida go'doominta ardayda
Abaal marinta asalka ah ee barashada
Ma ahayn ilaa aan kaqeyb galnay aqoon isweydaarsi guga oo diirada lagu saarey wax kaamil ahaanta waxaan aakhirkii ogaannay in kastoo gabadheena ay tahay mid caqli badan, jeceshahay inay waxbarto oo ay ku barwaaqowdo casharada iyo imtixaanada, jawiga fasalku hada ma awoodo inuu daboolo dhamaan baahideeda , gaar ahaan arrimaha bulshada iyo shucuurta. Waxaan go'aansanay inaan codsano barnaamijka Navigator-ka. - Cindy H.
Hadaanu nahay waalidiinta carruurta hibada leh kuma mahad celin karno waxa aad u qabanaysaan carruurteenna, iyo si hufan oo qosolkeenna oo dhan ah. Haysashada nabadgelyo iyo dhiirigelin, kobcin, jawi waxbarasho oo aan carruurteenna ugu dirno waxay la mid tahay galaas dheer oo biyo markaad xoqdo, wax kale ma noqon karaan kuwo qanciya oo hadana fudud. Fadlan ogow inaan weligood kula socodsiin doono horumarka ilmaheena hibada leh.Waxaad mudan tahay inaad ogaato sida dadaalkaagu uu u keenay natiijooyinka iyo maamulayaasha iskuulkaaga iyo xubnaha guddiga. waxay mudan yihiin in la ogaado in go'aankooda geesinimada leh ee ay ugu adeegeen dadkan carruurta ah ay lahaan doonaan natiijooyin qoto dheer sanadaha soo socda. " - Phil R.
"Waa maxay farqiga aan u aragno wiilkayaga, kuma mahadcelin karo kugu filan inaad dabacsan tahay oo aad diiradda saareyso baahidiisa dhabta ah."
"Waa maxay farqiga aan u aragno wiilkayaga. Kuma mahadcelin karo kugu filan adoo jilicsan oo diiradda saaraya baahiyihiisa dhabta ah. Caadi ahaan, waxaan aragnaa in dugsiyadu ay leeyihiin sharciyadooda oo aysan jirin wax bini'aadam ah oo iyaga ku habboon. Taasi dhabtii waxay ahayd maahan kiiska adiga ee waa inaad ogaataa waxa aad ku badashay isaga iyo annaga, runti waxay ahayd daqiiqad nolosha beddelaysa in qoyskeenna uu helo qof fahmaya baahidiisa iyo kartidiisa .Baahnayn in la yiraahdo, markii ugu horreysay, waxaan nahay Ma dhihi karo wax ku filan labadiisa todobaad ee ugu horeeya waxaanan ku faraxsanahay sida barnaamijkaagu ugu dambayntii u bilaabay inuu fahmo una qaabeeyo mustaqbalkiisa mustaqbalka. Mahadsanidiin adiga iyo macallimiinta si ay u fahmaan in wiilkayagu yahay mid gaar ah / gaar ah. " - Julie G.
"Barnaamijka Navigator wuxuu ina siiyay wiilkeenna macallin fahmaya baahidiisa bulsho iyo mid aqooneed wuxuuna siiyaa — dareen, dheelitir, iyo dulqaad aan caadi ahayn - fursado uu ku kori karo labada aag. Saaxiibtinimadiisa iyo xiriirkiisa asaagga ah waxay ku soo mareen qaabab aan soo marnay marwalba waxaan rajeynayey inuu waayo aragnimo yeelan doono. Barnaamijka Navigator-ka wuxuu u ahaa isaga iyo qoyskeena khibrad aad u qiimo badan oo aan shaki ku jirin. - James M.
Agaasimaha Barnaamijyada Barashada Sare
Ardayda Navigator ee fasalka labaad iyo saddexaad waxay ku raaxaysteen la sheekaysiga ardayda dugsiga sare ee ka socota MHS Astronomy Club habeen dhaweyd. Ardayda dugsiga sare waxay qorsheeyeen howlo barasho oo qabow gudaha, ka dibna waxay u amba baxeen dhanka dayaxa iyo xiddigaha cirka habeenka.